Erayadan haku dhihin qof qaba cudurka Kansarka - BBC News Somali
Erayadan haku dhihin qof qaba cudurka Kansarka
28 Jannaayo 2019
Image caption Mandy Mahoney,
Erayada Dagaalyahan,halyeey ayaa laga yaabaa in si dhiirigalin ah aad u dhahdo marka aad tilmaamayso qof qaba cudurka kansarka.
Balse daraasad cusub oo al soo saaray ayaa muujinaysa in qaar ka mid ah dadka qaba cudurka Kansarka ay erayadaasi u arkaan kuwa aan haboonayn oo aysan ahayn kuwa dhiirigalin ah.
Xarunta taageerta dadka qaba cudurka Kansarka ee fadhigeedu yahay UK ee Macmillan ayaa waxa ay ra'yigooda waydiisay 2,000 qof oo qaba Kansarka ama horey u qabay ,waxa ayna sheegeen in aysan wanaagsanayn adeegsiga erayada sida "la daalaa dhacaya " iyo "la dhibaataysan".
Hay'adda daraasadda samaysay ayaa sheegtay sida"loogu kala qaybsan yahay" tilmaamaha la siiyo dadka qaba Kansarka.
In qofka loogu yeero waxaa laga helay Kansar "waxa uu "dagaal" kula jiraa Kansarka ama la dhaho"waxa uu ku guuldaraystay "dagaalkii uu kula jiray kansarka " marka uu dhinto dhammaan waa erayo la adeegsado,sida ku cad daraasadda la sameeyay.
Waxaa erayadan loogu gafayo dadka qaba cudurka Kansarka inta badan lagu adeegsadaa maqaalada warbaahinta iyo baraha bulshada.
Dumarka madow oo looga digay kansarka naasaha
Faadumo Xuseen ''la'igama jaraayo naaskayga''
'Ma ahi qof wax dhiirigaliya
Mandy Mahoney, waa 47 jir, waxa ayna qabtaa kansaka ku dhaca naasaha.
Mahoney oo ku nool magaalada London,ayaa sanaddii 2011 laga helay kansarka waxa uu tan iyo xilligaasa uu ku soo laabtay 5 jeer.
Waxa ay tiri:"Waxaan u malaynayaa in erayada ay dadka dhahaan ay wax badan dadka u dhimmi karaan.
Waxa ay rumaysan tahay in erayada sida in qofka in lagu tilmaamo in uu la daalaa dhacayo cudurka Kansarka ama la dhaho qof ka badbaaday kansaka ay yihiin erayo qalbijab ku noqon kara dadka cusub ee laga helo cudurka.
Mandy waxa ay sidoo kale ka soo horjeedaa in dadka cudurka qaba la dhaho "waxa ay ku guuldareysteen dagaalkii uu kansarka ku hayay".
"Waxa ay taasi muujinaysa in aadan dagaal galin ama aadan quusan," ayay tiri.
Waxa ay taa badalkeeda doorbidaysaa in la adeegsado luuqad iska caadi ah sida in lagu tilmaamo "qof la nool cudura kansarka ".
"Ma ahi qof geesi ah, ma ahi qof dhiirigaliye ah,waxa aan isku dayayaa oo kali ah in aan ku noolaado noolashii hore," ayay tiri.